တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Hon. Rex Tillerson နှင့် တွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် သည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Hon. Rex Tillerson နှင့် ယနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန် ဧည့်ခန်းမဆောင်တွင် တွေ့ဆုံ၍ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်ခဲ့မှု အခြေအနေမှန်များ၊ ဘင်္ဂါလီများ တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးမှုအကြောင်းအရင်းမှန်များ၊ ဥပဒေနှင့်အညီ ပြန်လည်လက်ခံနိုင်ရေးဆောင်ရွက်မှုများ၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသော အကူအညီများမျှတမှုရှိရန် လိုအပ်သည့် အခြေအနေများ၊ အစိုးရနှင့်တပ်မတော် အပြည့်အ၀ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှုတားဆီးကာကွယ်ရေးတွင် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ သညျ အမရေိကနျနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Hon. Rex Tillerson နှငျ့ ယနေ့ နလေ့ယျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဇယြောသီရိဗိမာနျ ဧညျ့ခနျးမဆောငျတှငျ တှဆေုံ့၍ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးဖွဈပှားခဲ့သညျ့ အကွမျးဖကျ တိုကျခိုကျမှုဖွဈစဉျမြားဖွဈပျေါခဲ့မှု အခွအေနမှေနျမြား၊ ဘင်ျဂါလီမြား တဈဖကျနိုငျငံသို့ ထှကျပွေးမှုအကွောငျးအရငျးမှနျမြား၊ ဥပဒနှေငျ့အညီ ပွနျလညျလကျခံနိုငျရေးဆောငျရှကျမှုမြား၊ လူသားခငျြးစာနာထောကျထားသော အကူအညီမြားမြှတမှုရှိရနျ လိုအပျသညျ့ အခွအေနမြေား၊ အစိုးရနှငျ့တပျမတျော အပွညျ့အဝ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနမှေုမြား၊ မူးယဈဆေးဝါးတိုကျဖကျြရေးနှငျ့ အကွမျးဖကျမှုတားဆီးကာကှယျရေးတှငျ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားအား အပွနျအလှနျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၈ Admin 0
နိုဝင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၉ Admin 0